The Penthouse 3: War in Life (2021) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
3 Seasons 11 Episodes
TMDb: 8.5/10 17 votes
Created byKim Soon-ok
StarringBong Tae-gyu, Choi Ye-bin, Eugene, Ha Do-kwon, Han Ji-hyun, Jin Ji-hee, Kim Hyun-soo, Kim So-yeon, Kim Young-dae, Lee Ji-ah, Lee Tae-vin, Park Eun-seok, Shin Eun-kyung, Uhm Ki-joon, Yoon Jong-hoon, Yoon Joo-hee
Synopsis of The Penthouse 3: War in Life (2021)
ဟယျရာနနျးတျောလို့တငျစားလောကျတဲ့ အထပျ၁၀၀ပါသော ဇိမျခံမိုးမြှျောအိမျကွီးမှာဆိုရငျ မြားစှာသော လြို့ဝှကျခကျြတှေ ၊ မမွငျနိုငျသော ရညျမှနျးခကျြတှေ ပွညျ့နှကျလို့နပေါတယျ
ရှငျးဆူယှနျး ဟာ ဆိုရငျ ခမျြးခမျြးသာသာနဲ့ မှေးဖှားလာသူတဈယောကျပေါ့
ခြောငျးဆောဂငျြက တော့ သူ့သမီးလိုအပျတာမှနျသမြှကို ဖွညျ့ဆီးပေးနသေူပါ
အိုယှနျးဟီ ကတော့ ဘဝပေးအခွပေနကွေောငျ့ ဆငျးဆငျးရဲရဲ မှေးလာပမေယျ့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကွီးမားတဲ့သူ…
ဒီလိုနဲ့ ထိပျတိုကျတှကွေ့ရငျး ဘာတှဆေကျဖွဈသှားမလဲ….
ခမျြးသာမှု့ ၊ အာဏာ နဲ့ မြားစှာသော အရှုပျတျောပုံတှေ ဖွဈတညျရာ အထပျ၁၀၀ မိုးမြှျောတိုကျဟယျရာနနျးတျောပါ
ဟယ်ရာနန်းတော်လို့တင်စားလောက်တဲ့ အထပ်၁၀၀ပါသော ဇိမ်ခံမိုးမျှော်အိမ်ကြီးမှာဆိုရင် များစွာသော လျို့ဝှက်ချက်တွေ ၊ မမြင်နိုင်သော ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်
ရှင်းဆူယွန်း ဟာ ဆိုရင် ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ မွေးဖွားလာသူတစ်ယောက်ပေါ့
ချောင်းဆောဂျင်က တော့ သူ့သမီးလိုအပ်တာမှန်သမျှကို ဖြည့်ဆီးပေးနေသူပါ
အိုယွန်းဟီ ကတော့ ဘဝပေးအခြေပနေကြောင့် ဆင်းဆင်းရဲရဲ မွေးလာပေမယ့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကြီးမားတဲ့သူ…
ဒီလိုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြရင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲ….
ချမ်းသာမှု့ ၊ အာဏာ နဲ့ များစွာသော အရှုပ်တော်ပုံတွေ ဖြစ်တည်ရာ အထပ်၁၀၀ မိုးမျှော်တိုက်ဟယ်ရာနန်းတော်ပါ
OneDrive , TeraCloud
ProductionChorokbaem Media, Seoul Broadcasting System (SBS)
Firt air date2020-10-26
Last air date2021-06-04
Home PageThe Penthouse 3: War in Life (2021)
The Originals (2013) Season 5
Ghost Whisperer (2005) Season 2
Youth of May (2021) Complete